टूनाको साथ चामल - Thermomix रेसिपीहरू ThermoRecines
चामल24 मिनेट4 व्यक्ति
टूनाको साथ चामलको लागि यो नुस्खा एक डिश हो छिटो र सजिलो बनाउनको लागि, एक मधमा बनावट र एक ठूलो स्वादको साथ।
म अक्सर यो गर्दछ किनकि यो मलाई लाग्छ धेरै पूर्ण र मेरा छोरीहरूले यो धेरै मन पराउँछन् ... राम्रो, केवल मेरी छोरीहरू मात्र होइन, मेरो श्रीमान् र मलाई पनि यो मन पर्छ।
यो गर्न सजिलो भएको बाहेक बाहिर खान को लागी महान किनकि यो ढुवानी गर्न सजिलो छ। यसलाई केवल सिलेबल कन्टेनरमा राख्नुहोस् र काम वा स्कूलमा जानको लागि तयार।
1 टुना संग चामल
चामल धेरै नै पकाउने रेसिपीहरू जुन बच्चाहरूले राम्रोसँग खानेछन्।
कुल समय: 24M
१ ट्याब्लेट माछा स्टक वा नुनको
40 सेतो वाइन को छ g
जैतुनको तेलमा टुनाको3साना क्यान
हामीले लसुनको लौंगहरू राख्यौं, काली मिर्चलाई ठूला टुक्रामा काटेर गिलासमा स्टक क्यूब राख्यौं। हामी बिग्रियो Seconds सेकेन्ड, गति at मा। स्प्याटुलाको साथ हामी भित्ताहरू र गिलासको फल्याकमा ब्लेडतिर रहेको अवशेषहरू कम गर्छौं।
हामी तेल र कार्यक्रम थप्छौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान र गति 5।
हामी ब्लेडमा पुतली राख्छौं, चामल र कार्यक्रम थप्छौं २ मिनेट, भेरोमा तापमान, बाँया पालो र चम्चाको गति।
हामी पानी र मदिरा र कार्यक्रम समावेश गर्दछौं २ मिनेट, भेरोमा तापमान, बाँया पालो र चम्चाको गति।
यदि तपाईं अधिक गरेको चाहानुहुन्छ भने, हामी थप दुई मिनेट वा ११ मिनेटको सट्टा १ 13 मिनेटमा सिधा प्रोग्राम थप्छौं।
हामी यसलाई स्रोतमा हटाउँदछौं र दुई कैन भाँडिएको ट्यूना थप्छौं र यसको तेलको साथ। स्प्याटुलाको साथ हामी यसलाई राम्ररी मिलाउँदछौं।
हामी ट्युनालाई अर्को क्यानबाट यसलाई माथि सजावटको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं।
केहि मिनेट खडा र सेवा गर्नुहोस्।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: चामल र पास्ता, सजिलो, १/२ घण्टा भन्दा कम, माछा
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » चामल र पास्ता » टुना संग चामल
के धान ११ मिनेटमा मात्र गरिन्छ?
जब म सेतो एरियोज बनाउँछु, थर्मोमिक्समा, मैले यसलाई १ 14 मिनेट को लागी छोड्नु पर्छ
नमस्ते रोजा मलाई यो मनपर्दछ कि यो कसरी ११ मिनेटमा रहन्छ। मलाई लाग्छ यो स्वादको कुरा हो, त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जुन अतीत अलि रुचाउँछन् र अरू सबै एकदमै मिल्छन् र यसले चामलको प्रकार र ब्रान्डलाई पनि प्रयोग गर्दछ। तर मलाई लाग्दछ कि यसले रेसिपीमा प्रभाव पार्दैन, यदि तपाईंलाई यो कस्तो छ भन्ने मनपर्दैन भने, यो उहि तापमान र गतिमा केही मिनेट राख्नु कुरा हो। शुभकामना।
मारिया इबिज भन्यो
मलाई मद्दत चाहिन्छ मलाई थर्मस टी २१ छ र जब तपाईं बायाँ तर्फ जानुहुन्छ मलाई मेरो के गर्ने भनेर थाहा हुँदैन, रेसिपीहरू राम्रोसँग बाहिर आउँदैनन् र म यसलाई खर्च गर्दिनँ, आज मैले मरीनेट गरिएको पसलबाट आलु बनाए र तिनीहरू आए बाहिर पुरी, मैले पुतली र गती १ पनि राखेको छु। कृपया कसैले मलाई मार्गनिर्देशन गरे।
मारिया इबिएजलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार मारिया, बाँया पट्टि २१ लाई वेग १ द्वारा बदलियो र पुतला ब्लेडमा राख्नुहोस्। शुभकामना।
सत्य यो हो, यो एकदम राम्रो भयो, मैले खाना तयार पारेको छु, तपाईको ब्लगको लागि धेरै धन्यबाद, यो धेरै राम्रो छ
धेरै धेरै धन्यबाद, लौरा।
के हामी चामललाई सिसामा वा सिसामा राख्छौं?
नमस्ते मारिसा, चामल सिधा गिलासमा जान्छ। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ। शुभकामना।
यो ठूलो सुनिन्छ, मेरा बच्चाहरूले यसलाई मन पराउनेछन्। तर मसँग पुरानो मेशिन छ, राम्रोसंग the१ भन्दा पहिलेको। मैले समानताको तालिकामा हेरेको छु र यद्यपि मसँग गति छैन तर म आशा गर्दछु यो गति १ प्रयोग गरेर उही रहन्छ।
र मँ भन्छु यो कसरी भयो।
जोइलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंले यो गर्नुभयो? यो कस्तो देखिन्थ्यो? शुभकामना।
यी मामिलाहरूमा एरोज बमोजो राम्रोसँग गइरहेको छ, अभिवादन।
धन्यवाद। आज म गर्छु
यो काम गर्नुभयो, मारिसा? तपाईंलाई यो मन पर्यो? शुभकामना
हिजो मैले पहिलो पटक तपाईंको ब्लग देखेँ र म चामल बनाउनको लागि घर तयार भएँ, जस्तै गर्मीमा धेरै आमाहरू, मसँग मेरा बच्चाहरू छन् घरमा र म काम गर्दछु त्यसैले थर्मो पहिलेभन्दा बढी काम गर्दछ। मैले आज बिहान चामल बनाएँ काममा जानुभन्दा पहिले र यो स्वादिष्ट थियो, यो सफल थियो। ब्ल्गमा बधाई हो र आशा छ कि तपाईं हामीलाई विचारहरू दिनुहुन्छ।
धेरै धेरै धन्यबाद, पैट्रसिया। तपाईलाई हाम्रो ब्लग मन परेकोमा म खुशी छु र आशा छ कि तपाईले हाम्रा रेसिपीहरू मनपराउनुहुनेछ।
प्याट्रिसिया मलाई खुशी लागेको छ कि तपाईलाई यो मन पर्यो। किनभने यस प्रकारका व्यंजनहरू आमाका लागि उत्कृष्ट हुन्, किनकि तपाईं भन्नुभएको छ कि हामी नन-स्टप काम गर्दछौं र यसको शीर्षमा हामीलाई हाम्रा बौनेहरू सेवा गर्न जुनसुकै समय चाहिन्छ ... भाग्यले किचनमा हाम्रो सहयोगी लक्जरी हो।
म व्यंजनहरु को विशाल बहुमत2भान्सा वरिपरि झुण्डिएको र यसको बारे मा सजिलै संग कुनै पनि समय संग सजिलै बनाउँदछ, त्यसैले मलाई आशा छ कि हाम्रा व्यञ्जनहरू तपाइँलाई एक हात दिनुहोस्।
अभिवादन र हामीलाई भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यबाद।
अर्को दिन हेलो मैले लेख्न सुरु गरें र मैले समाप्त गरेकी छैन तर आज यदि म गर्नेछु भने, मसँग इन्टरनेट सम्पर्क छैन, म एक नौसिखिया हुँ, मैले चामललाई ठूलो बनाएको छु, तर people व्यक्तिको लागि यो पर्याप्त छैन।
म खुसी छु तानिया। मलाई पनि मन पर्छ। हामी people मान्छे खान्छौं तर एक डिशको रूपमा हैन। शुभकामना।
मैले गत हप्ता यो नुस्खा बनाएको थियो र मलाई यो साँच्चै मनपर्‍यो, मसँग दुईdसाना बच्चाहरू छन् एउटाdyears बर्ष र पुरानो सानोdyears बर्ष। सत्य यो हो कि मेरो घरमा हामी चारै जना राम्रो शिखर हुनुहुन्छ। ..
आज बिहान मैले यस नुस्खाको साथ आफैलाई प्रोत्साहित गरें, र यद्यपि अन्तमा मैले सोचें कि पानीको मात्रामा मैले गल्ती गरेको छु, किनकि यो ज्यादै सफा थियो, मैले आराम गरें र परिणाम राम्रो भयो!
म खुशी छु, चुस। यो धेरै धनी र रसीला चामल हो। हामी वास्तवमै यो मन पर्छ। शुभकामना।
मैले यो स्वादिष्ट नुस्खा बनाउने प्रयास गरेको छु र मेरो स्वादको लागि यसमा धेरै मिर्च स्वाद थियो र चामलमा केही रंगको अभाव छ। अर्को पटकको लागि मलाई लाग्छ कि म अलि अलि अलि अलि मिर्च राखी सकें र अलि अलि मीठो मिर्च हाल्छु। पक्कै पनि यो स्वाद जाँदै छ, ए? म तपाईको सबै व्यंजनहरुका लागि पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु किनकि उनीहरूलाई धन्यवाद छ मैले आफैलाई त्यस्ता चीजहरू गर्न उत्साह दिइरहेको छु जुन मैले कहिल्यै तयार नगरेको थिएँ।
धेरै धेरै धन्यबाद, स्यान्ड्रा। हामीले ती व्यंजनहरूलाई हामीले गरेझैँ राख्यौं, तर तब हामी प्रत्येकमा स्वाद हुन्छ र हामी तिनीहरूलाई आफ्नो रुचि नभएसम्म फरक पार्छौं। आशा छ कि अर्को पटक यो महान बाहिर जान्छ
हामीलाई हेर्न र अनुसरण गर्न धेरै धेरै धन्यबाद। शुभकामना।
नमस्ते केटीहरू, चामल महान छ किनकि मेरी आमाले यसलाई तयार पारेको छ र यदि तपाईंले केही एन्कोभि जैतुनहरू थप्नुभयो जुन तिनीहरू पहिले नै मरिसकेका छन्, यो प्रयास गर्नुहोस् र मलाई अंगालो हाल्नुहोस् र यसप्रकार जारी राख्नुहोस्
धेरै धेरै धन्यवाद चेलो, सत्य यो हो कि हामी तपाईंलाई माया र सुझावहरू दिन्छौं भनेर माया गर्दछौं। अर्को चोटि जब म चामल बनाउनेछु म तपाईंको जैतूनको सम्झना गर्नेछु।
मलाई यो चामल मन पर्छ, तर मैले यसलाई अलि लामो पकाउन छोडिदिएँ, र यो वास्तवमै अविश्वसनीय छ। आज हामी यसलाई फेरि खानेछौं। ओभिडो बाट अ .्गालो
मँ सामान्यतया यसलाई केहि अधिक मिनेट को लागी छोड्छु, बिनाबोर्डमा र हामी यो प्रेम गर्दछौं।
सबैलाई नमस्कार, आज मैले टुनाको साथ चावल बनाउन शुरू गरेको छु र सत्य यो हो कि यो एकदम स्वादिष्ट भयो, मसँग १ 14 मिनेट भएको छ र यो एकदमै मीठो छ, मेरो श्रीमानले थोरै पिसेको चीज थपेको छ र एक दिईएको छ रिसोट्टोको पोइन्ट। यो एक धेरै सजिलो, द्रुत र सहयोगी नुस्खा हो!
मलाई खुशी छ, आना। हामी, र विशेष गरी केटीहरू, यो पनि धेरै मनपराउँदछन्। यो एक धेरै धनी र पूर्ण पकवान हो। शुभकामना।
शुभ अपराह्न सबैलाई, यो एक समय भएको छ जबदेखि म यस पृष्ठमा संयोगले आएँ र सत्य यो हो कि मैले यो नुस्खा बनाएकोले मेरो श्रीमान्ले मलाई हप्तामा कम्तिमा एक पटक यसको लागि सोध्नुहुन्छ। यो महान हो किनकि हामीले दुबै काम छोडेका थियौं र यो एक क्षणमा सम्पन्न भयो।
यी स्वादिष्ट व्यंजनहरु साझा को लागी धेरै धन्यवाद।
चारी, हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद। मलाई खुशी छ कि तपाईलाई यो मन पर्यो। शुभकामना।
नमस्ते, The21 मा tuna संग नुस्खा र चामल मा मसँग एक छ कि, म के गति राख्न? मलाई तपाइँको व्यंजनहरु मनपर्दछ।
म्याग्डा, हामीले "बायाँ घुम्ने र चम्चा गति" राखेका रेसिपीहरूमा, तपाईंले बटरफ्लाइलाई ब्लेड र स्पीड 1 मा राख्नु पर्छ। मलाई आशा छ कि तपाईंलाई यो मनपर्छ, तपाईंले हामीलाई यसको बारेमा बताउनुहुनेछ। शुभकामना।
धन्यबाद, यो महान बने! !!!!
मग्दा, म तपाईंलाई धेरै मन पराउँछु। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद।
मलाई हाम्रो नोटबुक मन पर्‍यो मसँग थर्मोमिक्स २१ छ सबै रेसिपीहरू उनका लागि हुन् 21 धन्यवाद एन्टोनिया
नमस्ते एन्टोनिया। व्यंजनहरु The Th 31 को लागी हो, तर सबै तापक्रम र वेगमा भएका साना परिवर्तनहरुलाई ध्यानमा राख्दै Th Th 21 मा अनुकूल गर्न सकिन्छ।
आज हतारमा मैले टुनाको साथ चावल बनाएँ र धेरै राम्रा र धेरै छिटो थिए र मेरी छोरीहरूले यो मन पराउँथे, सूचीको लागि कति राम्रो खाना!, चिनियाँ कुखुरा उनीहरूलाई पनि मन पर्छ, थोरै चामलको साथ। मैले थर्मोमिक्स प्रयोग गरेको छु। तीन बर्ष र म यसलाई केवल केकको लागि प्रयोग गर्छु, म तपाईंलाई बधाई गर्छु तपाईंको ब्लगको लागि।
धेरै धेरै धन्यवाद, मारी कारमेन। मलाई आशा छ कि तपाइँ हाम्रा रेसिपीहरू मनपराउनुहुन्छ। शुभकामना।
हिजो राती मैले यो चामल बनाएको थिएँ तर मेरो श्रीमानलाई क्यान्ड टुना एकदम मनपर्दैन, मैले के गरे कि मैले चामल थपेको थोरै टुक्रामा, लगभग भूसुरुमा नै मैले चामल थपेको थिए। उस्तै रकम, समय, इत्यादिको साथ सबै चीज।
ठीक छ, तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नु पर्छ। चामल स्वादिष्ट हुन्छ। मैले एरोज बोंबा प्रयोग गरें र मैले सोचे कि यो अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अती गरी रहेको थियो, तर तपाई के गर्नुहुन्छ ऊ आफ्नो बिन्दुमा थियो। र यो पनि धेरै छिटो बनाउने विधि हो।
म छोटो समयको लागि पकाउँदै छु तर तपाईंको रेसिपीहरूसँग यो मेरो लागि धेरै सजिलो छ र मलाई नयाँ चीजहरू प्रयास गर्न प्रोत्साहन दिन्छ। कृपया हामीलाई यी स्वादिष्ट व्यंजनहरू प्रदान गर्न जारी राख्नुहोस्।
ती दुवैको लागि अंगालो।
मेरीबेल, म खुसी छु कि हाम्रा व्यञ्जनहरूले तपाईंलाई भान्साकोठामा सहयोग र मद्दत गर्छन् र सबै भन्दा बढि तपाईका सुझावहरूका लागि हजार धन्यवाद गर्दछन्, सँगै तपाईले यस पृष्ठलाई हरेक दिन पूर्ण बनाउनुहुन्छ।
यस ब्लगमा बधाई छ। अब म मिसिनको फाइदा लिन थाल्छु। मैले बोमा चामलको साथ रेसिपी प्रयास गरें र यो स्वादिष्ट छ। अर्को पटक म एक सानो मशरूम साटो जोड्छु र यो पनि स्वादिष्ट हुनेछ।
मलाई पक्का छ कि यो स्वादिष्ट हुनेछ, नुरिया। तपाईं हामीलाई भन्नुहुनेछ। शुभकामना।
नमस्ते, हिजो मैले यो चावल रातको खानाको लागि बनाएको थिएँ, र मेरी छोरी (5 वर्षको) अनुसार यो "स्वादिष्ट" थियो। तपाईंको मद्दतको लागि धन्यवाद
नमस्ते ईवा, मेरा छोरीहरू पनि उनीहरूलाई धेरै मन पराउँछन्। यो एक धेरै पूर्ण र धेरै धनी डिश हो। शुभकामना।
नमस्ते केटीहरू। मैले हाम्रो कम्प्युरी मारिबेललाई गरेझैँ गरेँ, सत्य भनेको यो हो कि तपाईको औंलाहरू दुखाई। तपाईले मेरो जीवनलाई एकदम राम्रो तरीकाले बदल्नु भएको छ भन्नका लागि, म उनलाई बोलाउँदा मेरो लोला बिना कोही पनि छैन। कृपया ती पठाउन जारी राख्नुहोस्। राम्रो व्यंजनहरु चुम्बन कडा।
धेरै धेरै धन्यवाद, जोहाना! तपाईलाई हाम्रो व्यंजनहरु र हाम्रो ब्लग मन पर्छ। अभिवादन र खुशीयाली छुट्टीको मौसम छ।
आज खानको लागि मैले यस चामल तयार पारेँ। यो स्वादिष्ट !!!, तपाइँका सबै व्यंजनहरू जस्तै। तपाईको व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद।
आना धन्यबाद, हामीलाई अनुसरण गर्न को लागी। म रसिनको साथ तपाईको सफलताको लागि खुशी छु र तपाई यस चामलको साथ ठीक हुनुहुन्छ किनकि यो आउँदैन।
मोनिका भिरटो भन्यो
चावल, बुनेन्स्स्स्स्सिएइइमो, मेरो घरमा विजयी भएको छ। यो पहिलो चामल रेसिपी हो जुन म Th१ मा बनाउँछु, यो केवल एउटै मात्र हुने छैन, मैले यसलाई १२ मिनेटमा राखें र केही बेरमै स्वादिष्ट भयो र मेरो साना नानीहरूले पनि मन पराए, तिनीहरूले पनि खुर्सानी खाए ... तपाईको ब्लगमा बधाई छ, कार्यरत आमालाई जुन तपाईले आफ्नो व्यंजनहरुका साथ जीवन सजिलो बनाउँनु हुन्छ। केवल मैले प्राप्त गर्न सकेको छैन तपाईंको महान् व्यंजनहरू, एउटा भाँडो, र यस्तै अन्यहरूको लागि सही लि link्क हो। मोनिका, जारागोजा
मोनिका VIRTO लाई जवाफ दिनुहोस्
मोनिका, मँ खुशी छु तपाईलाई यो मन पर्यो। सत्य यो हो कि यो महान छ। हामी आमाहरू पनि काम गर्दैछौं, त्यसैले हाम्रो व्यंजनहरू सामान्यतया सरल र व्यावहारिक हुन्छन्।
मैले भर्खरै चामल बनाएँ। धेरै राम्रो। धन्यबाद बच्चाहरुलाई !!
म खुशी छु, Gema! हामीलाई यो पनि धेरै मन पर्छ। शुभकामना।
धेरै धनी र धेरै सरल। धेरै धेरै धन्यवाद !! हामीलाई विचारहरू दिनुहोस् कि तपाईं नयाँ चीजहरू गर्नुभएन भने किचन भोर लाग्छ। बाई !!
मलाई खुशी छ कि तपाईलाई यो मन परेको छ, मिला। हामी हाम्रो व्यंजनहरु संग जारी हुनेछ। शुभकामना।
नमस्कार, तपाईंको पृष्ठमा सब भन्दा बधाईको लागि, मैले पहिले नै केही रेसिपीहरू प्रयोग गरिसकें र सबै धेरै राम्रा छन्।
आज मैले टुनाको साथ चावल बनाएको छु, मैले यसलाई बनाए जस्तै स्वाद लिने छु किनकि यो अति उत्तम छ।
सबै समान छ तर, चामल थप्नु अघि, म सॉसमा रोल गरिएको मशरूमको एउटा डिब्बा राख्छु, २ मीट्रिक टन, भेरोमा बाँया मोड, पुतलाको साथ चम्चा गति,
त्यसपछि चावल (त्यो नै समान छ) म पानी, वाइन, नुन र रंग थप्छु र म १ 14 मीट्रिक टन, भेरोमा तापमान, म बायाँतिर फर्कन्छ, चम्चाको वेग र सम्पूर्ण सफलता।
म तपाइँलाई मेरा सबै साथीहरूलाई सिफारिस गर्दछु किनकि मैले थर्मोमिक्स प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले र अब म पागल छु। रेसिपीहरू रोक्न रोक्नुहोस्। अह! भोली म वाक्रट क्रीम प्रयोग गर्न चाहन्छु।
च्याउ संग राम्रो! म यो एम। कारमेन जस्तै प्रमाणित गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद।
तपाईं केटीहरू अचम्मको छन्। यो थाल धेरै धनी छ र बनाउन को लागी सुपर सजिलो छ। धेरै धेरै धन्यबाद ... म भोली भोली खाजाको लागि के गर्नेछु।
मँ खुशी छु कि तपाईलाई यो मनपर्‍यो, मार्ग! शुभकामना।
नमस्कार ,mmmmmmmmm यो कसरी धनी हुनु पर्छ ... रकम थोरै बढाउन सकिन्छ? तपाईंलाई थाहा छ, अधिक व्यक्तिको लागि यो गर्नका लागि
र खैरो चामलको साथ यसलाई बनाउन के परिवर्तन गर्नुपर्नेछ? धेरै समय र बढी पानी?
Lolina लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते लोलिना, अधिक व्यक्तिहरूको लागि समान अनुपातमा मात्राहरू वृद्धि गर्दछ। मैले यसलाई खैरो चामलको साथ प्रयोग गरेको छैन, तर मलाई लाग्छ कि यसलाई धेरै समय र पानी चाहिन्छ। मलाई थाहा छैन यो कस्तो हुनेछ, यदि तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नुभयो भने मलाई भन्नुहोस् यो कसरी हुन्छ। शुभकामना।
नमस्कार मँ बुझ्दिन जब तपाईं तापमान भेरोमा बायाँ मोड र चम्चाको गति भन्छु। कृपया तपाईले मलाई यो व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद
नमस्ते एन्जेला, जब हामी भन्छौं बायाँ र vel मा बारी। चम्चा, Th21 मा तपाईंले ब्लेड र भेलमा पुतली राख्नु पर्छ। १ वस्तुको लागि। भेरोमा तपाईले सब भन्दा माथि राख्नु पर्छ। शुभकामना।
स्वादिष्ट हामी सबैलाई यो घर मा मन पर्छ। अभिवादन।
म धेरै खुसी छु, एस्टेपोनेरा!
मेरो प्रश्न हो, यदि तपाइँ एक दिनदेखि भोल बनाउनुहुन्छ भने, यो ठीक छ?
नमस्ते एस्तेर, यो भर्खरै बनाइएको जस्तो देखिदैन तर मलाई जे होस् यो मन पराउँछ र म यसलाई काममा लिनको लागि माया गर्छु। शुभकामना।
यो हप्ता मैले यो चामल बनाएको छु, यो स्वादिष्ट छ, यो सफल भएको छ, केवल मेरो परिवारले थोरै मात्र चिनेको छ तर मँ अधिक मात्रा थप्न डराउँछु किनकि एक पटक मैले चामलको पकाउने विधि गरेपछि यो बाहिर आएन। राम्रो।
म तपाइँलाई मन परेकोमा धेरै खुशी छु, एना! तपाईं थप मात्रा बनाउन १/1 थप सामग्री थप्न सक्नुहुन्छ। शुभकामना।
मैले भर्खरै यो रेसिपी खाएँ र यो स्वादिष्ट छ। म तिमीलाई व्यंजनहरु बधाई दिन्छु, उनीहरू बनाउन सजिलो छ र ती स्वादिष्ट छन्।
धेरै धेरै धन्यबाद, Lourdes! मलाई खुशी छ कि तपाईलाई यो मन पर्यो। शुभकामना।
नुस्खाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद, म यो लामो समय को लागी पछाडि छु। मेरो चचेरी बहिनी आनाले मलाई भनेका थिए कि उनीहरूले यो थर्मोमिक्स प्रदर्शनमा उनीहरूलाई देखाए र उनी प्रायः त्यसो गर्छिन्। धन्यबाद, आज मैले यो गरें र यो आख्यानबाट बाहिर आयो। धेरै धेरै धन्यबाद, तपाईको ब्लग मेरो मनपर्नेहरु मध्ये एक हो। बधाई छ।
धेरै धेरै धन्यबाद, एलिसाबेट! तपाईलाई हाम्रो ब्लग मन परेकोमा म धेरै खुसी छु।
माफल्दा .73 भन्यो
रिच, धनी, धनी, मेरो परिवारले रमाइलो गर्यो। हामी THX र तपाईंको कल्पित पृष्ठमा नयाँ छौं। धन्यबाद।
माफल्दा to73 लाई जवाफ दिनुहोस्
माफल्दा Welcome73 लाई स्वागत छ! तपाईलाई हाम्रो ब्लग मन परेकोमा म खुशी छु।
.. हेलो !!! ... चामल निकै मीठो चामल बाहिर आयो !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! …… मलाई यो मन पर्यो !! ! !!… .तै मैले रूसी सलाद तयार पारेको छु… .. र यो छोटो समयमा कसरी भयो भनेर म अचम्ममा परें…। र अतिरिक्त भाँडाहरू नलगाईकन तपाईंसँग एक ठूलो रूसी सलाद छ !!!! ...। मसँग यो तयार छ जब तपाईं आउनुहुन्छ। मेरो श्रीमान्, ... यो डिश माया गर्नुहुन्छ !!… .हााहा… ..
… .. म तपाईंलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहान्छु ... .. तपाई मलाई साथीहरूसँग खाना खानको लागि के सल्लाह दिनुहुन्छ (हामी adults वयस्कहरू हुनेछौं) …… हामीले लामो समयदेखि एक अर्कालाई देखेका छैनौं र म स्वादिलो ​​केहि चीज तयार पार्न चाहान्छु। र सजिलो ... किनभने मसँग धेरै समय छैन र म थाम्िक्ससँग तुलनात्मक रूपमा थोरै भएको छु ……………। मिठाईको लागि मैले दहीको साथ चकलेट मउसे केकको बारेमा सोचेको छु जुन एकदम सजिलो छ…। र यो गर्न सकिन्छ अस्ति ………।
...। अग्रिम धन्यवाद !!!!!… .. एक चुम्बन !!
लेटिजियालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते लेटिसिया, म धेरै खुसी छु कि तपाईलाई हाम्रो व्यञ्जनहरू मनपर्‍यो। तपाईंको साथीहरूसँग खाजाको लागि, म केहि स्टार्टर्सहरू सिफारिश गर्दछु जस्तै गजापाचो, चटनीको मशरूम, केही पाटे, सामन रोल, ... र दोस्रो, मलाई थाहा छैन यदि तपाईं मासु वा माछा रुचाउनुहुन्छ। तर राम्रो र धेरै स्टार्टरको साथ, दोस्रो ग्रिल वा ग्रील गर्न सकिन्छ। केक राम्रो विकल्प हो, म पनि तिरामिसु सिफारिस गर्दछु। तपाईं मलाई खानाको बारेमा बताउनुहुन्छ। शुभकामना।
शनिबार मैले यो चामल खानको लागि बनाएँ र सबै जना प्रभावित भए - तिनीहरूले यसलाई मन पराए। द्रुत र सजिलो हुनुको अलावा, यो एक स्वादिष्ट पकवान हो। धन्यबाद!
मँ धेरै खुशी छु कि तपाईले यो मनपराउनु भयो, एस्टेफानिया! शुभकामना।
तपाईको ब्लगमा नमस्कार र बधाई! म एक थर्मोमिक्सको प्रशंसक हुँ, १ वर्ष र आधाको लागि मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी! सत्य यो हो कि आज म थकित, थोरै बिरामी, र समयको अभावमा थिएँ र भोलीको खाजा तयार गर्न चाहान्थे। र त्यसमाथि म भान्सामा कुनै नाआडाइन बाँकी छैन! थर्मोबाट नुस्खा विचारहरूको खोजी गर्दै, मैले तपाईंलाई फेला पारे! चमत्कारी रूपमा यसमा सबै सामग्रीहरू थिए! फ्रिजरमा काली मिर्च, टुना जहाँ सँधै, र बमबा चावल जुन कहिल्यै हराउँदैन (थर्मोमिक्सको लागि चामलको खीर बनाउनको लागि जसले मलाई सधैं चकित पार्दछ!) यहाँ मसँग मेरो खाजा छ, मेरो श्रीमान् र दुई बगहरू! अवश्य पनि, मँ धेरै पानी हालेँ, किनकि बम्बा चावलले बढी सोस्छ, र मैले यसलाई २ minutes मिनेट पकाउन दिन्छु, जुन मलाई भूतकाल मन पर्छ। धन्यबाद, र अर्को सम्म, धेरै चाँडै पक्कै, कि मैले तपाईंलाई मनपर्ने मा राखे!
एलोडीलाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धेरै एलोडी धन्यबाद!
म तपाईको ब्ल्ग लाई लामो समय देखि हेरिरहेको छु र मलाई तपाईको व्यंजनहरु साँच्चिकै मन पर्छ, ती सबै एकदम सरल र बनाउन सजिलो लाग्दछ ...
हिजो मेरो श्रीमानलाई चामल बनाउन प्रोत्साहित गरियो र यो गुडिसिसिस्मिमो बाहिर आयो !!!!!!! यो पहिलो पटक पनि थालको साथ चामल बनाएको थियो र मैले तपाईंलाई पहिले नै भन्दछु कि यो नुस्खा निश्चित रूपमा दोहोर्याइनेछ ...
भोलि हामी बियर सॉसको साथ हेकलाई जाँच्दैछौं कि कसरी पछाडि ... म यसको बारेमा तपाईंलाई भन्नेछु
व्यंजनहरु र सबै भन्दा राम्रो सम्बन्ध को लागी धन्यवाद
मँ धेरै खुशी छु तपाईलाई यो मनपरायो, रोसियो! शुभकामना।
नमस्ते, म यसमा नयाँ छु, तर म धान बनाउँदैछु। म तिमीलाई भन्छु। शुभकामना
riquisimooooo, यो हामी दुईलाई यो कसरी थियो भनेर छोटो बनाएको छ; मैले फ्रिज गरिएको भुटेको रातो मरिच राखेको छु किनकि यो र color्ग र मलिलोपनमा हासिल गरेकोसँग प्राकृतिक थिएन, र मर्दाडोना फिश ब्रोथ जुन मैले पानीको सट्टामा खर्च गर्नुपर्दथ्यो…। यस्तो प्रभावकारी नतिजाको लागि राम्रा सफा र छिटो !!! तिमी मलाई आश्चर्यचकित गर्न छोड्दैनौ !!
धन्यबाद माइटे !! कस्तो रमाईलो सन्देश, मँ खुशी छु कि तपाईको लागि राम्रो भयो ... मलाई यो मनपर्दछ, यो मेरो मनपर्ने भाँडा हो, के तिमी ट्युनाको सट्टामा जैतुनको प्रयोग गर्यौ? रमाइलो खैर, भुनेको काली मिर्चको बारेमा सफलता, ए? यसले निश्चित रूपमा यसलाई अविश्वसनीय बिन्दु दिन्छ, र पक्कै पनि, माछाको श्रोभन पहिले नै १० हो, त्यसैले तपाईंसँग पक्कै पनि एउटा उत्कृष्ट डिश हुनेछ। म तपाईंको विचारहरू प्रतिलिपि गर्नेछु !!
मैले यो रातको खानाको लागि गरे र मेरो केटा र मलाई यो मन पर्थ्यो !!! मैले भर्खरै खुर्सानी र लसुन काटें, किनकि मेरो केटा, उसले तरकारीका टुक्राहरू देख्यो भने, त्यसले खन्न थाल्छ र अन्त्यमा उसले केहि पनि खाँदैन, साना बच्चाहरूको जस्तै ... र राम्रोसँग, उसको आँखाले ऊ खाली थियो, हाहाहा। र मसँग टुना नभएको कारण मैले सॉसेज थपें, र अब मैले यसलाई कुखुराको साथ प्रयोग गर्ने प्रयास गरें, र यो पनि राम्रो छ, चामल उत्तम बाहिर आउँछ। तपाइँलाई एक हजार धन्यवाद र संतलाई थर्मोमिक्स आविष्कार गर्ने एक हजार धन्यवाद।
नमस्ते म आज भात तयार गर्न जाँदैछु .. तर मसँग एउटा प्रश्न छ .. कति पानी ????
हाय ईवा, यसलाई सामग्रीमा राख्नुहोस्, hot०० ग्राम तातो पानी। तपाईं हामीलाई यो कस्तो देखिन्छ हामीलाई बताउनुहोस्!
मैले हिजो यो खाना पकाउनको लागि बनाएँ, र सत्य यो हो कि मेरो श्रीमान्‌ र म यसलाई माया गर्थे !!
सजिलोसँग स्वादिष्ट नुस्खा जुन तपाईसँग घरमा सामान्य रूपमा हुन्छ। उत्तम !!
धन्यवाद रेसिपी को लागी तपाईलाई धेरै धन्यवाद, मलाई थाहा छ यो नयाँ छैन, जुन म यहाँ नयाँ हुँ म हुँ, त्यसैले म ढिला भएँ।
कत्ति राम्रो छ कि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो! सत्य यो हो कि थर्मोमिक्समा चामलहरू धेरै धनी छन्, सेतो चावलबाट शुरू गरेर। भेलमा भातको चामलको टुक्रा छोडिदिन्छु यदि तिमीलाई थाहा छैन भने। यो पनि धेरै सजिलो छ, साधारण सामग्रीको साथ र यो उत्कृष्ट देखिन्छ: http://www.thermorecetas.com/2011/01/20/receta-thermomix-arroz-con-aceitunas/.
जे होस् एक नुस्खा महिनौं को लागी प्रकाशित भएको छ, हामी मन पराउछौं कि तपाईले उनीहरुलाई बनाउनु भएको छ र तपाईको राय जान्नु हुन्छ।
धन्यवाद राकेल !!
कति राम्रो बेथलेहेम! यो साँच्चिकै स्वादिलो ​​चामल हो। म आशा गर्दछु कि तपाईको केटाले यो पनि मन परायो। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद, हाम्रा विधिहरू तयार पार्न र यसका बारे हामीलाई बताउनु भएकोमा धन्यवाद! चुम्बन
सत्य यो हो कि यस जस्तो विचारहरू के हुन् जुन हामीले दैनिक मेनुलाई अगाडि बढाउनु पर्छ।
हामी तपाईंको टिप्पणीको कदर गर्दछौं!
मेरो grams०० ग्राम पानी थर्मोमिक्समा ठीक हुँदैन। ..
हेलो मार्टा, थर्मोमिक्सको तपाईसँग कस्तो मोडल छ?
यो वास्तवमै सजिलो छिटो र स्वादिष्ट हुन्छ। मेरो स्वाद को लागी यो ११ मिनेट को लागी उत्तम भयो जस्तो नुस्खामा दर्साईन्छ र बाँकी।।
कस्तो राम्रो Rocío। हामी मनपराउँदछौं कि तपाईं हाम्रा रेसिपीहरू मन पराउनुहुन्छ।
हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंको टिप्पणीको साथ अधिक पाठकहरू यसलाई तयार पार्न प्रोत्साहित छन्।
धन्यबाद, रोकाओ, तपाईलाई यो मन परेकोमा म धेरै खुशी छु। अंगालो!
धन्यबादका लागि धन्यवाद, यो ठूलो र धेरै सजिलो र छिटो भएको छ ... तर थोरै मात्रा ... म यो कसरी गर्न सक्दछु? वा यो शीर्षमा छ?
नमस्कार रोजर, हामी people व्यक्तिको मात्रा बढाउन सक्छौं। यस तरिकाले चामल6350० g, water ०० g तातो पानी र 900० g रक्सी हुन्छ। समय तिनीहरूलाई एक समान राख्नु भयो, ठीक छ? र तरकारीहरू तपाईं प्रत्येकको १०० g सम्म थप्न सक्नुहुन्छ र टुनाको थप १ थप गर्न सक्नुहुन्छ। भाग्यमानी! हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद।
एलिसिया टेनेराइफ भन्यो
नमस्कार! मैले भर्खर यो गरें र यो स्वादिष्ट थियो। र यति सरल र छिटो…। जटिलता बिना। धेरै धेरै धन्यवाद!
ऐलिसलाई जवाफ दिनुहोस्। टेनेराइफ
घटना !! तपाईको सन्देश को लागी धेरै धन्यबाद 🙂
ओटमील "स्ट्रबेरी शर्टकेक" ब्रेकफास्टको लागि दलिया